Ny lesoka lehibe momba ny haino aman-jery sosialy tamin'ny 2013 | Martech Zone
Mpiasa mpangalatra, sioka voalahatra, kaonty voajirika, fanapahana vaovao amin'ny zava-nitranga mampalahelo, tsy fahatsapana firazanana, ary tenifototra an-keriny… taona iray hafa nahafaly an'ireo lesoka media sosialy izany. Ireo orinasa nijaly tamin'ireto voina PR ireto dia samy lehibe sy kely… saingy ilaina ny manampy fa ny lesoka media sosialy rehetra dia azo averina. Tena tsy fantatro ny tranga manokana izay nisy fiatraikany maharitra teo amin'ny orinasa ka ny mpivarotra orinasa, na dia menatra aza, dia tsy tokony hatahotra ny vokany maharitra.
Miaina ao anaty tontolo iray mahatezitra ny mpanjifa isika ary tia mitsambikina amin'ny fotoana mahamenatra orinasa iray. Matetika ireo orinasa dia tsy manan-anarana sy tsy manam-tarehy - mampihomehy - zavatra izay afaka hamaha mora foana ny media sosialy. Indraindray dia hitantsika ireo orinasa izay miantraika amin'ny fiatraikany kely indrindra amin'ny hadisoana dia manana olona tena izy, tena sary ary anarana tena eo imason'ny orinasan'izy ireo. Tsy dia manafika olona tena izy ireo ny olona raha tokony hanafika noho ny sary famantarana sy ny vidin'ny stock!
The Masters in Guide Marketing apetraho miaraka ity infographic mahafinaritra ity. Aza matahotra, ry mpivarotra… fa miezaha koa tsy hanao ireo lesoka ireo.
Tags: orinasa mpanao mofo amyburger kinghividyepicuriouskaonty voajirikatenifototra nalaina an-kerinyhmvtrano fanatobiana tranojp morgan manenjikakmartfanapahana vaovaotsy fahatsapana firazananaMpiasa mpangalatrabitsika voalahatratsy fahombiazan'ny media sosialylesoka amin'ny media sosialyRhômôna spearminttescony tongolofisehoan-javatra mampivarahontsana